Apple's cheap smart watch coming on Tuesday? - TechPana Tech News Nepal
सोमबार, भाद्र २९, २०७७ २०:३६
मंगलबार आउला त एप्पलको सस्तो स्मार्ट वाच ?
काठमाडौं । प्रविधि विश्वको दिग्गज कम्पनी एप्पल मंगलबार आफ्नो टाइम फ्लाइज इभेन्ट आयोजना गर्दैछ । सामान्यता हरेक वर्ष सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने यो कार्यक्रममार्फत एप्पलले आफ्नो नयाँ आईफोन सिरिज सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।
तर यसपटक आईफोन बाहेकका अन्य प्रडक्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । बताइए अनुसार एप्पलले १५ सेप्टेम्बरको कार्यक्रममार्फत नेक्स्ट जेनेरेसन (अर्को पुस्ताको) वाच र एउटा आईप्याड लञ्च गर्नेछ ।
यसका साथै केही रिपोर्टहरुमा यो कार्यक्रममार्फत एप्पलले आफ्नो सस्तो स्मार्ट वाच समेत सार्वजनिक गर्ने खबरहरु आइरहेका छन् । जसले एप्पल वाच सिरिज थ्रीको स्थान ओगट्नेछ ।
यो सस्तो स्मार्ट वाचको नाम एप्पल वाच एसई हुने दाबी गरिएको छ । यसै महिना ब्लुमबर्गमा प्रकाशित रिपोर्टमा एप्पलले आफ्नो वाच सिरिज फाइभको सक्सेसर तथा वाच सिरिज थ्रीको रिप्लेसमेन्टमा काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
यस बाहेक टिप्सटर जोन प्रोसरले ट्वीटमार्फत सेप्टेम्बर १५ मा एप्पल वाचका दुई मोडेल आउन सक्ने बताएका थिए ।
यस्तो हुनसक्छ फिचर
सस्तो एप्पल वाच ४० एमएम र ४४ एमएम गरी दुई भेरियन्टमा आउने अनुमान छ । जसमा वाच सिरिज फोरको जस्तै डिजाइन र एम नाइन प्रोसेसर हुनसक्छ ।
सस्तो बनाउँदा यसमा सधैं अन रहने डिस्प्ले तथा ईसीजी जस्ता केही प्रिमियम फिचर भने नहुन सक्छन् । एप्पल वाच सिरिज थ्री कम्पनीको सबैभन्दा लोकप्रिय स्मार्टफोनमा एक थियो । एप्पलको नयाँ स्मार्ट वाचले सोझो रुपमा फिटबिट र ह्वावेको स्मार्टवाचसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
रिपोर्टहरुमा सस्तो स्मार्ट वाचको मूल्य १९९ डलर अर्थात करिब २३ हजार तीन सय रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एप्पलले आजदेखि आईफोन तथा आईप्याड प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ अपरेटिङ
आईप्याड एट्थ जेनेरेसन सार्वजनिक, एन्ड्रोइड ट्याब्लेट भन्दा तीन गुणा शक्तिशाली !
काठमाडौं । एप्पलले मंगलबार एट्थ जेनेरेन आईप्याड सार्वजनिक गरैको छ । कम्पनीकाे इन्ट्री लेभलको आईप्याडकाे
काठमाडौं । एप्पलले एप्पल वाच एसई सार्वजनिक गरेको छ । आज भएको एप्पलको अनलाइन लञ्च